Wasiirka Amniga XFS Xasan Xundubay Jimcaale ayaa ka hadlay xaflad dallacsiin ah oo loogu sameeyay saraakiisha booliska Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay inay qabtaan, la shaqeynta shacabka iyo ilaalinta sharciyada lagu soo tababaray.
Xasan Xundubay Jimcaale ayaa sheegay in wada shaqeyn la’aanta shacabka iyo booliska aysan shaqeyn doonin howsha loo xilsaaray, maadaama iskaashigooda uu horseedi karo guul ama guuldaro hadba sida ay u wada shaqeeyaan.
Wuxuu ku amaanay ciidamada kala duwan ee dowlada sida ay isaga xil saareen amaanka, wuxuu kaloo sheegay in milateriga ay burburiyeen bambooyin la doonayay in caasimada la dhigo, sidoo kale booliska iyo nabad sugida ayaa ka howlgalayay gudaha magaalada Muqdisho
“Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Amniga, Xoogga & Asluubta waxay ku tallaabsadeen horumar ballaaran sanadka 2020, iyagoo ka hortagay in ka badan 33% qaraxyo, dilal qorsheysan iyo rabshado waana sii wadi doonnaa”. Sidaasi waxaa yiri Wasiirka Amniga XFS.
Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubay Jimcaale ayaa sheegay in waxqabadka muuqda uu u baahan yahay in la xoojiyo, oo aan la qalqal galin oo loo qaadin meel sare sida uu hadalka u dhigay.
Bruno Fernandes wuxuu shaaca ka qaaday inay ka go’antahay